Fashil ku soo idlaaday wada hadaladii Rooble iyo Musharaxiinta | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Fashil ku soo idlaaday wada hadaladii Rooble iyo Musharaxiinta
Shir u dhaxeeyey Ra’iisul wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo Golaha Midowga Musharaxiinta oo xalay ka furmay Hotelka Decale ee magaalada Muqdisho ayaa fashil ku soo dhamaaday.
Shirkan ayaa looga hadlayey xal u helida khilaafka ka taagan doorashada iyo qodobo kale ayaa la isku mari waayey ka dib muudo saacadood ka badan oo la wada hadlayey
Qodobka ugu weyn ee la isku fahmi waayey ayaa ahaa dalab ka yimid musharaxiinta oo ahaa laga qeyb-galiyo wadahadallada ku saabsan doorashada dalka ee u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka iyo madax goboleedyada, taasi oo Rooble ku gacan seyray.
Wasiirka amniga Qaranka Xasan Xundubey oo saxaafada la hadlay ayaa sheegay in wada hadalladii Murashaxiinta iyo xukuumadda xil gaarsiinta ay qaateen saacado badan, balse aan lagu guuleysan in wax natiijo ah kasoo baxaan, maadaama buu yiri mucaaradku dalbadeen in laga qeyb-geliyo shirka golaha wadatashiga ee dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda dhexe.
“Arrintaasi waa mid aan horay u dhicin go’aan ahaanna xukuumaddu keligeed ma laha, waa mid u taalla dowlad goboleedyada oo dhan” ayuu yiri wasiir Xundubey oo intaas ku daray in shir kale labada ay iskugu iman doonaan.
Previous articleWar deg deg ah: kooxo Hubeysan oo goor dhawayd Weerar ku qaaday Xabsiga Weyn ee Magaalada Boosaaso..
Next articleRooble oo fashirka Shirkii Xalay ka dib hadlay oo ku baaqay in wada hadalada ay socdaan
Dhammaan ciidamada Mareykanka ah ee ku suganaa Soomaaliya ayaa bishaan ka baxay gudaha dalka Soomaaliya . Taliska milatiga Mareykanka ma aysan faahfaahinin sababta Soomaaliya...